China Luxury Quality Paper Packaging igbe maka mmanya mmanya uhie na-acha anụnụ anụnụ nke etinyere ya na ndị na-emepụta ihe na Blue EVA | Raymin
Industrylọ Ọrụ Ngwa: Wine
Ihe: 157gsm ntekwasa akwụkwọ + 1500gsm grayboard
Njirimara: Inogide, Akwa Ogo
Nha: 30 x 15 x 6cm
Agba: Agba ntụ Bipute
Imecha elu: Abù UV, Matte ma ọ bụ Nleba Anya Na-egbukepụ egbukepụ, Nkpuchi Stil, Embossing, Debossing, Gold ma ọ bụ Silver na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ
Oge nlele: 2-5 ụbọchị
Fgwọ :le: 50 $, nwere ike ịkwụghachi mgbe nnukwu iwu kwadoro
Nyefee Ihe Nlereanya: UPS, Fedex, DHL
Oge nnyefe: 15-18 ụbọchị, dabere na nke ukwu
Kwụ Tergwọ Okwu: T / T, L / C (maka nnukwu uru iji), Western Union, Paypal
Ọ dị mkpa ịhọrọ ụdị igbe nke na-adọrọ adọrọ ma na-arụ ọrụ. E nwere ụdị igbe dị iche iche a na-enye na Ngosipụta Raymin.
Mmechi Magnetik: A na-eme igbe mmechi nke magnet n'otu ibe. Ejiri igbe osisi isi awọ dị elu mee igbe ndị a. A na-eme igbe ndị a na ọdịdị cube na rectangle ma nwee ike ijide ọtụtụ ihe.
Nkwusi elu: A na-eme igbe a site na chipboard. Eweliri igbe mkpuchi elu nke ụzọ abụọ dị iche iche nke na-agbagharị ibe ha. Ọ bụ ezie na ụdị mkpuchi mkpuchi ahụ dịkarịsịrị anya mana ihe na - eme ka ọ pụọ iche bụ na ọ nwere ike ijide ọtụtụ ihe yana enwere ike ịhazi ya n'ụdị na nha dị iche iche.
Akwụkwọ Style Box: a na-eme igbe ụdị akwụkwọ n'ụdị akwụkwọ. Styledị a na-egbochi ihe ahụ ka ọ ghara ịpụ. A na-ejikarị ụdị igbe akwụkwọ ahụ mee ihe dị ka igbe ngosi dịka ọ na-egosipụta ngwaahịa na ụdị ejiji.
Igbe Na-emebi emebi: Ejiri igbe osisi isi awọ mee igbe ndị na-agbanwe agbanwe. Nke a na-enwekarị mmechi magnet ma ọ bụ nke rịbọn. Styledị, ọdịdị, ọnụ ahịa dị ọnụ, yana ịchekwa ikike dị iche iche bụ ihe na-eme ka ọ dị mma maka onyinye.
Igbe Mpepu Epeepe: Igbe mkpuchi mkpuchi dịkarịsịrị mana eriri, buckles na magnets jikọtara na igbe akụkụ anọ a bụ ihe na-enye anya nkecha.
Igbe Mfonye Ejiri: A na-eme ụdị a site na chipboard. Igbe igbe slide dị ka drawer. Ha zuru oke maka ngwaahịa ndị na-emebi emebi ma nwee ike gbajie ngwa ngwa. Oxdị ihe nkiri slide na-enye ngwaahịa nwere oke ikike yana yana nchekwa siri ike pụọ n'ụdị mmebi ọ bụla.
Igbe Olu Aka Ubu: Igbe ndị siri ike olu n’ubu na-ewu ewu n’ihi na ha nwere nnukwu ọrụ. E ji igbe abụọ mee igbe ahụ otu bụ igbe ahụ na ibe ya bụ mkpuchi. A na-emechi ihe mkpuchi ahụ n'ụzọ dị omimi karịa igbe ahụ n'onwe ya. Igbe a na-enye nchebe kachasị na ngwaahịa a.
Igbe a na-eme gburugburu: Igbe ndị gbara gburugburu na-enye ngwaahịa gị amara dị oke ọnụ. Igbe ndị a bụ nke mpempe abụọ otu igbe dị ka cylindrical, ebe nke ọzọ bụ mkpuchi.
Cover Cover: Igbe mkpuchi ihu abụọ yiri ụdị igbe mkpuchi, agbanyeghị, isi ebumnuche igbe a bụ igosi ngwaahịa gị n'ahịa. Igbe mkpuchi ihu ọha nwere windo transperent na mkpuchi ha na-eme ka ngwaahịa ahụ pụta maka ndị ahịa. Nwere ike ịhọrọ igbe nke kachasị mma maka ngwaahịa gị site na nso anyị ma ọ bụ mepụta otu ụdị onwe gị na ndị otu ọkachamara anyị. Site n'enyemaka nke ndị na-ese ihe anyị nwere mara mma na ndị okike na teknụzụ anyị dị elu, anyị nwere ike imepụta igbe dị mma ahaziri ahazi n'ụdị ọ bụla, ụdị na ụdị ọ bụla. Ngosipụta Raymin na-enye 10-28pt nke ọkpụrụkpụ maka igbe ndị ahụ.
Nke gara aga: Elu àgwà mkpuchi na Base Style isiike akwụkwọ igbe
Osote: Mkpuchi mkpọchi mmechi ụdị igbe onyinye maka ejiji ntutu nke ejiri akwa silk
Ribbon mkpọchi mmechi style igbe igbe ntutu dre ...
Collapsible ewepụghị mpịachi ịkpakọba mma igbe maka ...